Ubheke kude usomabhizinisi osemncane | News24
Ubheke kude usomabhizinisi osemncane
ISITHOMBE:INQOLOBANE YE-ECHO Usomabhizinisi osemncane wase Sobantu uthi intsha ayithi ilinde uhulumeni, kube kukhona ekwenzayo.
USOMABHIZINISI osemncane waseSobantu uthi intsha ayithi ilinde imisebenzi kuhulumeni ibe iqhamuka nezindlela ezinobuciko zokulwa nobubha isalindile. UNOKULUNGA NGOBESE uxoxisane noMnu Nathi Sibisi osungule inkampani yokuqoqa imfucuza, ukuhlanza izindawo ezingcolile, ukupenda nokwakha imigwaqo.
Leli bhungu elineminyaka engama 22 lisungule iBhovungane Contractors nyakenye emva kokuba lifunde ngezokuphathwa kwamabhizinisi kusomabhizinisi wendawo uMnu Mzabalazo Dlamini okumanje usezinze eGoli.
Ekhuluma ne-Echo uthe ukhethe ukwenza lo msebenzi abaningi abangawubuka njengodelelekile, ngoba ebona igebe ukuthi ababaningi abantu abawenzayo.
Uthe: “Kumanje kunabantu abayisikhombisa abasebenza ngaphansi kwale nkampani okuyibona esigijima nabo ukwenza lo msebenzi. Okwamanje sisebenza kakhulu ezindaweni zalapha eMgungundlovu, amahhovisi kahulumeni namafemu okuyiwona anenkinga kakhulu yokungcola nemfucuza.”
Uthe emva kokuphothula isikole ngo-2013, ube eseba nentshisekelo kwezamabhizinisi, okuyilapho etholane noDlamini okuwuyena obemcushisa ukuthi kwenziwa kanjani.
“Ungifundise ukuthi kubalulekile ukuthi ngithole izindlela zokwenza imali ingisebenzele. Ngibe sengiqala ngithatha izifundo zokuhweba (online trading), engigcine sengikwenza sengifundisa nabanye. Emva kokuzwa kaningana uhulumeni ethi akhona amathuba futhi uyafisa ukusebenzisana nentsha, ngicabange ukusungula le nkampani ngonyaka odlule. Uma sibhekisisa akuyona kuphela imisebenzi lapho osuke ugqoke uthayi engenisa imali, kodwa le misebenzi edelelekile iyona esematheni kulezi zinsuku. Ziningi izindawo ezingcolile, ziningi izakhiwo zahulumeni ezidinga ukupendwa futhi miningi imigwaqo eyakhiwayo. Ngibe sengisebenzisa leli thuba ukuvala leli gebe,” kuqhuba leli bhungu lakwaSibisi.
Ukugcizelele ukuthi njengoba esengumuntu omusha, baningi abamlekeleleyo ukuze ukhule umsebenzi wakhe okungabalwa uMbhishobhi uVusi Dube noSthembile Vilakazi okuwuyena owengamele inkampani. Uthe yize enaleli bhizinisi, uhlele ukuqhubeka nokufunda, enze izifundo ezimfishane kwezamabhizinisi, njengoba ekholelwa ukuthi asikho isikhali sokulwa nobubha esidlula imfundo.
“Iphupho lami ukubona leli bhizinisi lidlondlobala sengikwazi nokusungula inhlangano engaxhasiwe uhulumeni (NGO) ezobe ibhekelele nokuqeqesha intsha kwezamabhizinisi. Esikhathini samanje imisebenzi ayisekho, futhi uhulumeni ngeke akwenze konke. Intsha ayithi ilindile uxhaso kuhulumeni, kube kukhona izindlela ezintsha ezinobuciko ezobe izisebenzisa ukulwa nobubha. Phezu kwakho konke, ingakhohlwa ukuthi imfundo ibalulekile,” kusho yena